Salmon voasarimakirana miaraka amina ovy sy broccoli | Recipe ao an-dakozia
Maria vazquez | 23/05/2021 10:00 | Resety trondro
Tao an-trano Tianay ny lovia combo. Matetika izahay dia manomana iray ho an'ny sakafo hariva, mampifangaro ireo akora izay omaninay amin'izany fotoana izany amin'ny hafa izay tavela tamin'ny fiomanana teo aloha. Fomba iray tsara hanadinana ny vata fampangatsiahana ho aotra, satria avelantsika miaraka amin'ity salmon voasarimakirana ity miaraka amina ovy sy broccoli.
Ny fanomanana an'ity kobo ity dia tsy misy fahasarotana. Inona no tsy maintsy andanianao fotoana bebe kokoa dia ny fanomanana ny kitay ovy nendasina; Na dia notapahina tsara sy nohosorana menaka kely aza dia tsy maharitra 15 minitra vao vita. Fiarahana tonga lafatra ho an'ireo izay tia an'io fangaro io.
Raha ny salmon kosa, dia atao amin'ny zavamaniry na ao anaty lapoely fa tsy misy menaka ary misy kely voasarimakirana hitondra freshness. Dia lazaiko aminao ny fomba. Rehefa masaka dia tsy hanana zavatra bebe kokoa hatao ianao araka ny lazaiko anao etsy ambany. Vonona ny mahandro ity lovia salmon ity?
Ity lovia salmon kombo miaraka amin'ny ovy sy hazo broccoli ity dia safidy fisakafoanana lafatra. Andramo izany!
Sombina salmon lehibe 2
½ paprika mamy eran`ny sotrokely
Saosy sotro 1 sotrokely
Manomboka amin'ny famoahana ny ovy sy manapaka azy ho tapa-kazo. Apetrantsika eo amin'ny fitoeran'ny lafaoro ireo, nopetahany taratasy hoditra.
Afangaro menaka oliva roa tablespoons, ny paprika, sira ary dipoavatra mba hanandrana amina kaopy kely. Miaraka amin'ny borosy lakozia borosio ireo tapa-kazo miaraka amin'ity fangaro ity alohan'ny hametrahana azy ao anaty lafaoro.
Mofomamy amin'ny 180ºC mandritra ny 15 minitra na mandra-pahalemy.
Raha, andao handrahoana ny broccoli mandritra ny efatra minitra. Aorian'izay dia milamina kely izahay, raraka ary miaro.
Vantany vao vonona ny ovy sy broccoli, manomana ny salmon izahay. Ny sira sy ny dipoavatra dia samy voadio ary apetraho anaty vilany mafana izay naparitantsika tamina menaka kely.
Mahandro 3 minitra izahay ary avy eo mamadika azy. Fotoana izay araraotinay asio silaka voasarimakirana 4. Andrahoy amin'ny ilany hafa mandra-pahavitany ary arotsaka amin'ny lovia miaraka amin'ireo hazo ovy.
Vita, raha irintsika, mandalo ny broccoli amin'ny lapoaly izahay, manampy ny saosy soja. Sasao mandritra ny roa minitra ary arotsaho ny salmon voasarimakirana miaraka amina ovy sy broccoli.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » vilia » Resety trondro » Voasarimakirana miaraka amin'ny tsorakazo sy Broccoli